ad mar DIGITAL MARKETING - AdvertisingMyanmar.com
☎ 09 979 300 900 ★ http://advertisingmyanmar.com ► ad mar
ဒစ်ဂျစ်တယ် မားကက်တင်း လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာသိသင့်သလဲ?
What to know before you do digital marketing?
ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာသုံးပြီး မားကက်တင်း ဆင်းတာ၊ ဈေးရောင်းတာတို့မှာ လုပ်ငန်းအကြီးအသေးပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ် ၅ဆင့် ကွဲတတ်ပါတယ်။ ဈေးကူရောင်းပေး စေချင်တာလား။ လူသိအောင် လုပ်ရုံဘဲလား။ ဆိုင်နေရာ သိအောင် လုပ်ချင်တာလား။ e-commerce လုပ်မှာလား။ payment engine တပ်မလား။ ကြော်ငြာ ရုံသက်သက် ဘဲလား။ ဈေးအလိုအလျောက် ရောင်းခိုင်းမှာလား။ နာမည် ပိုကြီးသထက် ကြီးအောင် လုပ်ချင်တာလား။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
MARKET RESEARCH - ဈေးကွက် သုတေသန လုပ်တာကတော့ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက "မမှားတမ်း စီမံကိန်း" တွေ လုပ်နိုင်စေဘို့အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ် foundation အခိုင်အမာ ချပြီးမှ လုပ်ကြတဲ့ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ လုပ်ငန်း အများစုကတော့ informal research လောက်ဘဲ လုပ်ကြပြီး ဒီအဆင့်ကို ကျော်သွားကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စနစ်တကျ လုပ်လိုပါတယ်၊ ဟာကွက် မရှိစေချင်ဘူးဆိုရင် digital landscape မှာ သင့်လုပ်ငန်းဟာ ဘယ်အခြေအနေ၊ ပြိုင်ဘက်တွေက ဘယ်အခြေအနေ၊ အင်အား ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာတွေကို သိနိုင်ဘို့အတွက် ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့က ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။ digital positioning, competitor analysis စတာတွေ အသေးစိတ် ပါဝင်တဲ့ Market Positioning Report ကို အော်ဒါ မှာယူလိုက်ပါ။
DIGITAL BRANDING - မိမိရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်တွေကို လူသိအောင်လုပ်ဘို့အတွက် အခြေခံကျတဲ့ digital trademark အဖြစ်နဲ့ ဒိုမိန်း (internet domain) ဆိုတာကို မှတ်ပုံ တင်ကြရ ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဆင်တူ လုံးဝမရှိနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိအောင်၊ လူကြီးမင်းရဲ့ နာမည်ပေါက် ရရှိအောင် တရားဝင် ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်။ ဒါကို အများဆုံး ၁၀ နှစ်ဘဲ လောလောဆယ် ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် သက်တမ်းတိုးသွားဘို့ လိုပါတယ်။ brand registration အဆင့်ပြီးမှာ service mark, trademark တို့ကို digital branding အဆင့်ဆင့် ဆက်လက် လုပ်သွားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်တူ သူများ လက်မဦးသွားခင် မှတ်ပုံတင်ထားလိုက်ပါ။
CONTENT MARKETING - အကြောင်းအရာတွေ၊ စာတွေ၊ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို (video blog) လူမှုကွန်ယက် (social media) စတာတွေနဲ့ လူအများကို မိမိဖောက်သည် ဖြစ်လာအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံတာ၊ e-commerce online store တွေနဲ့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ငွေလက်ခံ ရောင်းချတာဟာ လက်တွေ့ အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ လက်ငင်း ငွေရစေတဲ့ core digital marketing နဲ့ digital sales အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အဓိက အကျဆုံး အပိုင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ web site ဆောက်ဘို့၊ shopping cart တပ်ဘို့၊ payment gateway ချိတ်ဘို့၊ဆိုတာတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဘို့ ရက်ချိန်းယူပါ။
DIGITAL ADVERTISING - marketing လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ product, price, place, promotion ထဲက promotion ဆိုတဲ့ ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဟာ ပြိုင်ဘက်တွေ များလွန်းလာတဲ့ အခုအချိန်မှာ ပိုအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍက ပါဝင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ digital advertising team ဟာ ဂူဂဲကြော်ငြာ အခုရေ သန်း ၂၀ ကျော်အတွက် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ ဖူးပါပြီ။ Facebook မှာ ကြော်ငြာပါ။ ဂူဂဲနဲ့ အခြား ဝဗ်ဆိုက် ၂၀၀၀၀၀၀ ကျော်မှာ ကြော်ငြာပါ။ လူကြီးမင်းရဲ့ ကြော်ငြာ ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ media-buying services တွေနဲ့ copy-writing services တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မြေစမ်း ခရမ်းပျိုး စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ အတော်ကြာ သွားနေခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ၊ အချိန်ကုန် ငွေကုန်ပြီးနောက်မှ ad mar digital marketing ရုံးကို ပြောင်းလာ တတ်ကြပါတယ်။ google advertising အတွေ့အကြုံ ၁၁ နှစ်ရှိတဲ့ ပတ်တနာနဲ့ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ပါ။
DIGITAL PR - လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းရဲ့ mission, vision တွေအပေါ် အခြေခံပြီး၊ social media marketing လုပ်ပေး ပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်း အကြောင်းကို အပတ်စဉ်၊ နေ့စဉ် ပုံမှန် ရေးပေးတာ၊ Facebook ကနေ လာမေးတာရှိရင် ရှင်းပြပေးတာ၊ အကြောင်း ပြန်ပေးတာ စတဲ့ basic PR function တွေ လုပ်ပေးဘို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို အပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ad mar digital marketing ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် ပြန်လည် ရရှိလာပြီးတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ myanmars.net နဲ့ ကြော်ငြာဌာနကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ကြော်ငြာ ပေါင်းစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်တဲ့ online ad store: advertisingmyanmar.com အဖြစ်နဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မှာ ad mar digital marketing လို့ တိုသွားအောင် နာမည်ပြောင်း ခဲ့ပါတယ်။
ad mar digital marketing was founded at the dawn of digital openess in Myanmar in 2013. It was originally known as AdvertisingMyanmar.com, the first ever online ad store in Myanmar, where 1-stop shopping of many advertising services became possible.
No. 3/2 Myanmar ICT Park, Universities Hlaing Campus, Yangon 11052, Myanmar
t: (+95) 09 979 300 900, 01-652323, 01-652250
Read more: Google Advertising Services
နည်းပညာသုံးပြီး ဈေးကွက်ထိုးဖောက်တာကတော့ အတော် ကျယ်ပြန့်လွန်းပါတယ်။ ဈေးကွက် သုတေသန ပြုစုတာ၊ သုတေသန စာတမ်းပြု အစီရင်ခံစာရေးသားတာကနေ၊ ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲ၊ အနုပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးသမား စတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လူမှုအသိုင်းအဝန်းမှာ လူကြိုက်များလာအောင် ပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အထိ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သိချင်ရင် အပေါ်က ပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ။
The scope of digital marketing consultant services coversawide from market research to digital PR: • market research • self/competitor analysis • strategy planing • strategy development • strategic positioning • digital branding • brand repositioning • competitor analysis • positive inbound dev • customer engagement • influencer marketing • game marketing • campaign marketing • HRD • event management • reputation management • disaster management • keywords
Read more: Consultation Services
Read more: Facebook Advertising Services
Ad Mar Digital Marketing (AdvertisingMyanmar.com), and Myanmar's Net
Opt Out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
All the material, content, infrastructure, tour packages and available reservation services on this website are owned, operated and provided by www.AdvertisingMyanmar.com (Ad Mar Digital Marketing) and are protected under related existing laws of Myanmar. Certain names, words, titles, phrases, logos, icons, graphics or designs in the pages of this Website may constitute trade-names, trade-marks or service marks of Ad Mar Digital Marketing or its affiliates, or Ad Mar Digital Marketing or its affiliates may have been licensed to use them. The display of trademarks, trade names or service marks on pages on this Website does not imply thatalicense of any kind has been granted to anyone else.
All visitor to our website (www.AdvertisingMyanmar.com) are free to download the material posted on this website for non-commercial use purpose, to keep temporarily on the particular computer or other related devices and to print it (if needed) for your own personal purposes. You agreed that you do not acquire or violate the ownership rights of any downloaded materials and/or contents. You may refrain from distribution of the copies of material and/or contents for any purpose or frame it in any site you create or operate. You agree to abide by all copyright notices, information and restrictions contained in any content on this Website. Unauthorized downloading, transmission, publication or other copying or modification (including partial or whole) of material posted on this Website, including trademarks, trade names and service marks, may violate common or civil law, trademark law and copyright law, other related laws and may result in legal action. Ad Mar Digital Marketing reserves the full right to take legal action against any unlawful use of the trade-names, trademarks and images of Ad Mar Digital Marketing and its affiliates found on this website.
Through the website, Ad Mar Digital Marketing provides an online platform through which you can browse different types of river cruise programs with different fleet and make booking for such tour program. By makingabooking through the Site, you make an offer to bookareservation at the price listed for such reservation and such other terms and conditions stated on the Site, which shall becomeabinding contract when accepted by Ad Mar Digital Marketing which in turn means the reservation has been confirmed by Ad Mar Digital Marketing. We will acknowledge the acceptance of your Hotel booking via an e-mail confirmation.
The services provided by of Ad Mar Digital Marketing are available only to individuals who can form legally binding contracts under applicable law, and thus, are not available to minors. By using this site, you represent that you are of sufficient legal age to use this site and to create binding legal obligations for any liability you may incur asaresult of the use of this site. You may use www.advertisingmyanmar.com to make legitimate reservations or purchases, but you cannot use the website to make any speculative, false or fraudulent reservation, any reservation in anticipation of demand, or for any purpose that is deemed unlawful or prohibited by these Terms and Conditions. Ad Mar Digital Marketing may, in its sole discretion, terminate or restrict your access to the Web site, in whole or in part, at any time without notice and without liability to Ad Mar Digital Marketing.
In order to receive or view certain features or services or program or privilege offered on or through the website may necessary you to register asamember (including setting upausername and password), registration page is created for wholesalers, operators, agencies and other travel professionals to provide complete and detailed information about Ad Mar Digital Marketing Cruises. You are completely responsible for maintaining the confidentiality of the information you hold for your account, including username and password, and for any and all activity that occurs under your account asaresult of you failing to keep this information secure and confidential. You agree to inform Ad Mar Digital Marketing promptly if you have found any unauthorized use of your account or password, or any other breach of security or your privacy. You may be held liable for losses incurred by Ad Mar Digital Marketing or any other user of or visitor to the Site due to someone else using your Ad Mar Digital Marketing username, password or account asaresult of your failing to keep your account information secure and confidential.
Without consent or permission of the other user, you may not use or attempt to use anyone else’s Ad Mar Digital Marketing username, password or account. For this case Ad Mar Digital Marketing cannot and will not and shall not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with these obligations.
Each rate booked at Ad Mar Digital Marketing, is subject toaCancellation Policy. We reserve the right to cancel or modify reservations where it appears thatacustomer has engaged in fraudulent or inappropriate activity or under other circumstances where it appears that the reservations contain or resulted fromamistake or error. We reserve the right to cancel or amend bookings if they do not adhere to our terms & conditions.
Ad Mar Digital Marketing reserve the right to cancel contracts based upon false information being displayed in relation to price or service at any point in time.